Akụkọ - Miri gbasie ike ma nyere Yongjie aka ịkwalite ọrụ ya nwere ọgụgụ isi
Mie gbasaa mgbanwe ma nyere Yongjie kwalite ya nwere ọgụgụ isi n'ichepụta
Fewbọchị ole na ole gara aga, Yongjie ji obi ike mee nzukọ mgbatị ụkwụ na-agbanwe agbanwe, onye isi oche nke ụlọ ọrụ ahụ Shen Jianguo ji aka ya pịa bọtịnụ mmalite. “N’okpuru mmetụta nke ọrịa na-efe efe nke ụlọ na nke ndị si mba ọzọ ugbu a, akụ na ụba ụwa na-eche nsogbu ihu. Anyị kwesịrị "anya n'ime" na-onwe anyị, na n'ihu guzosie ike uru nke otutu, ngwa ngwa, ezi na echekwa 'nwere ike ịmepụta ọzọ kwukwara uru n'ihi na ndị ahịa. ” Maazị Shen rụtụrụ aka na ọ bara uru karị ịmalite ọrụ mgbanwe dabere n'oge a.
Na nzukọ ahụ, Maazị Shen nyere ụlọ ọrụ ikike ụlọ ọrụ na-ahụ maka ndụmọdụ, wee nye ndị ọrụ 3 ọrụ otu ọrụ 5S na ndị otu ndọtị njikwa njikwa, ndị otu PMC ka mma, na ndị otu TPM. Ndị niile sonyere na-a oathụ iyi na njikọ ndị ọzọ. , Ma wepụta atụmatụ ọrụ.
N’ikpeazụ, Maazị Shen wepụtara ihe atọ achọrọ maka ndị ọrụ niile: Nke mbụ, nnukwu ịdị n’otu echiche, mgbe Lean na-agwụ agwụ, naanị mgbe emere ya, bụ naanị ụzọ ụlọ ọrụ ga-esi meziwanye ma mepee; Nke abụọ, mee ihe ozugbo ma gbue egbu; nke ato, gbakorita aka iru ihe mgbaru ọsọ a ma debe ya. Ọnọdụ nke nzukọ ahụ nwere ọkụ, ma onye ọ bụla nwere obi ike na nsonaazụ a tụrụ anya ya.
N'ọdịnihu, Yong jie ga-esi ọnwụ na-a attentiona ntị na ọhụrụ nke sayensị na teknụzụ, na-arụkọ ọrụ ọnụ na Beijing University of Science and Technology, Central South University na ndị ọzọ anụ ụlọ ma ama mahadum, research oru, ekesịpde Provincial enterprise Institute na Provincial enterprise nnyocha na mmepe etiti. Anyị na-enyocha ma mepụta ụdị ihe dị iche iche dị iche iche nke aluminom, na-ezute ihe ndị teknụzụ sitere n'aka ndị ahịa dị iche iche.
Yongjie ga-eso usoro iwu azụmahịa "jikwaa ụwa mbụ na klas enterprise, ike mba ika ngwaahịa", Ọnwụ na elu àgwà mmepe ụzọ, na-agbalị kasị mma anyị ike Yong jie dị ka a ọlaedo enterprise na aluminum nhazi ubi.